သငျသိထားသငျ့တဲ့ ရှေးဦးသူနာပွု အမွနျနညျးလမျးလေးတှေ - Lifestyle Myanmar
သငျသိထားသငျ့တဲ့ ရှေးဦးသူနာပွု အမွနျနညျးလမျးလေးတှေ
ရှေးဦးသူနာပွုအခွခေံအခကျြတှကေို သိထားခွငျးက အရေးပျေါအခွအေနတေဈခုမှာ သငျ့ကိုယျသငျအပါအဝငျ တခွားသူတှရေဲ့ အသကျကို ကယျတငျကူညီနိုငျပါတယျ။ အရေးပျေါအခွအေနတေဈခုကွုံလာရငျ အခွအေနတေဈခုကို ဘယျလိုသတျမှတျမလဲ? သငျဘယျလိုကူညီပေးနိုငျမလဲ?အကူအညီလိုတဲ့အရာလား? မလိုတဲ့အရာလား?ဆိုတာ ကှဲကှဲပွားပွားသိလာစပေါတယျ။ ဆရာဝနျတဈဦးဆီ မရောကျမီ လူနာအားအခိုကျအတနျ့ သကျသာစဖေို့ ပွုစုပေးရနျသာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူတိုငျးက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အမွဲတမျး ဘယျလိုဂရုစိုကျရမလဲဆိုတာ up-to-date ဖွဈခငျြကွတာကွောငျ့ လူတိုငျးသိထားသငျ့သော ရှေးဦးသူနာပွုစုနညျး အမွနျနညျးလမျးတဈခြို့ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
လကျမှာ ပွတျရှဒဏျရာသို့ ပေါကျပွဲဒဏျရာတှရေလာတဲ့အခါ လကျအား သငျ့နှလုံးlevelရဲ့ အထကျကို မွှောကျထားပေးပါ။ ဒါက ရောငျရမျးခွငျးကို သကျသာစသေလို အရညျယိုစီးမှုမှလညျး ကူညီပေးပါတယျ။ သငျ့ဒဏျရာက တငျပါးပျေါမှာဖွဈလြှငျ လဲလြောငျးနပွေီး ခေါငျးအုံးတှနှေငျ့အတူ မွှငျ့ထားပေးပါ။ ဒဏျရာကို မွှငျ့ထားဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျ နှလုံး levelမှာ သို့မဟုတျ နီးနိုငျသမြှ နီးအောငျ ထားဖို့ ကွိုးစားပါ။
၂။ အရပွေားအပျေါယံအလှာ အပူလောငျတာ
အရပွေားအပျေါယံအလှာ အပူလောငျတဲ့အခါ အနညျးငယျနာကငျြပွီး နီမွနျးရောငျရမျးတာမြိုး ဖွဈနိုငျပမေယျ့ စိုးရိမျစရာ မရှိပါဘူး။ အပူလောငျတာကို ကုသဖို့ ဒဏျရာကို ရနှေေးနှေးဖွငျ့ဆေးပါ။ ရခေဲရကေ ပိုပွီးသကျသာတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ အမှနျတကယျတော့ ရခေဲရနှေငျ့ ခကျြခငျြးဆေးတာက တဈရှူးပကျြစီးမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ အပူလောငျတာကို ရနှေေးနှေးဖွငျ့ သနျ့ရှငျးပွီးနောကျမှာ ရခေဲဝတျတဈခုနှငျ့ ကပျထားပေးပါ။ ထောပတျကို တခြို့က ရိုးရာဆေးတဈလကျအဖွဈ သုံးကွပမေယျ့ အပူရဲ့လှတျထုတျမှုကို နှေးကှးစတောကွောငျ့ ဒဏျရာကို ပိုပွီးတော့တောငျ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ရနှေငျ့ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါကို ခပျပဈြပဈြဖြျောပွီး အပူလောငျတဲ့ နရောကိုလိမျးထားပေးပါ။
၃။ Heart attacks
Heart attacksနှငျ့ ကွုံရတဲ့အခါ ရှေးဦးသူနာပွုစောစောရရှိခွငျးက ထိခိုကျပကျြစီးမှုကို အကနျ့အသကျဖွဈစပေါတယျ။ အကျစပရငျဆေးနဲ့ ဓါတျမတညျ့တာ၊ ဆရာဝနျက မသောကျဖို့ ညှနျကွားထားတာမရှိလြှငျ အကျစပရငျဆေး တဈပွားကို ဝါးစားခွငျးက သှေးလှတျကွောမြားကို ပိတျစပွေီး သှေးခဲမှုကို ဖွဈစသေော သှေး platelets တှကေို တားဆီးပေးပါတယျ။ အကျစပရငျဆေးသောကျတဲ့အခါ ဆေးပမာဏနညျးနညျးလေးသာ သောကျဖို့နှငျ့ ရနှေငျ့သောကျတာ သို့ ဒီအတိုငျးမြိုခတြာထကျ ဆေးပွားကို ဝါးစားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ဒါက မွနျမွနျအလုပျဖွဈပါတယျ၊ တတျနိုငျသမြှ အမွနျဆုံးအရေးပျေါ ဝနျဆောငျမှုကို ဆကျသှယျဖို့ ကွိုးစားပါ။
ပြားတုပျခံရလြှငျ အဆိပျဆူးကိုဖယျဖို့လိုပါတယျ၊ အရပွေားထဲက အဆိပျဆူးကိုဆှဲထုတျတာက အဆိပျကိုလြော့နညျးသှားစပေါတယျ။ အရေးကွီးဆုံးကတော့ အခြိနျကိုကျဖွဈဖို့ပါပဲ။ တတျနိုငျသမြှအမွနျဆုံး အဆူးကို ဇာကနာဖွငျ့ ဆှဲထုတျ၊ ဖယျရှားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဆူးထှကျသှားတာနဲ့ ဒဏျရာကို ဆေးကွောပွီး ရခေဲဖတျအုပျထားပါ။ အလာ့ဂဈြဖွဈလာရငျ တတျနိုငျသမြှ အမွနျဆုံး ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသပါ။
အရိုးကြိုးတာနှငျ့ ကွုံလာတဲ့အခါ ဒဏျရာကို ဖွောငျ့ဖွောငျ့ထားဖို့(ဥပမာ-ခွထေောကျ/လကျမှာအရိုးကြိုးတဲ့အခါ သှားဆှဲဆနျ့ဖို့) မကွိုးစားပါနဲ့။ အရိုးကို ထပျမံထိခိုကျမှု မဖွဈအောငျ မလိုအပျဘဲ မလှုပျရှားပါနဲ့။ ကြိုးတဲ့အရိုးကို နရောမရှအေ့ောငျ အဝတျခေါကျထူထူတဈခုကို သုံးပွီး ငွိမျအောငျ စညျးထားပေးပါ။ ရောငျရမျးတာ သကျသာစဖေို့ ရခေဲဝတျကပျပေးပါ။ ရခေဲဝတျကို အရပွေားပျေါတိုကျရိုကျမကပျဘဲ အဝတျတဈခုခုပတျပွီးမှ ကပျပါ။ ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသပါ။
တခါတလမှော အသားထဲကို သဈသားစတှေ၊ စူးတှေ ဝငျနတောကွုံဖူးမှာပါ။ ဒီလိုဆူးစူးတာ၊ သဈသားစတှေ ဝငျတာက အရပွေားကို ရောငျရမျးစပွေီး အလှယျတကူ ပိုးဝငျတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုကွုံရတဲ့အခါ ပိုးသတျဆေးနှငျ့ အရငျဆုံး ပိုးသနျ့စငျပေးပွီး ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ရထေဲမှာ ပိုးသတျထားတဲ့ အပျနှငျ့ ဖယျရှားပေးသငျ့ပါတယျ။ အစထှကျလာပွီဆိုရငျ ဇာကနာဖွငျ့ ဖယျရှားနိုငျပါတယျ။ ပွီးနောကျ အဲ့ဒီနရောကို ဆပျပွာ၊ ရနှေငျ့ ဆေးကွောပေးပါ။
၆။ အသကျရှုလမျးကွောငျး ပိတျတဲ့အခါ
တဈယောကျယောကျ အသကျရှုတာ ရပျတနျ့ပွီဆိုရငျ အမြားအားဖွငျ့ သူတို့ရဲ့ လကွေောငျးကို တဈခုခုပိတျဆို့နတော ကွောငျ့ပါ။ သူတို့ရဲ့ ပါးစပျထဲမှာ တဈခုခုဆို့နတော ရှိမရှိစဈဆေးပါ။ အရညျ(သို့)အသကျရှုလမျးကွောငျး ပိတျစနေိုငျတဲ့အရာတှကေို ဖယျရှားပါ။ လကွေောငျးပှငျ့ဖို့ နဖူး သို့ ခေါငျးရဲ့ထိပျနားမှာ သငျ့လကျကိုထားပွီး လူနာရဲ့ ခေါငျးကိုစောငျးပွီး မေးစကေို့ ပငျ့ထားပေးပါ။ တနညျးအားဖွငျ့ သငျ့လကျတှကေို မေးရိုးအောကျမှာထားပွီး အောကျမေးရိုးကို အပျေါကိုတှနျးခွငျးဖွငျ့ “jaw thrust”လို့ချေါတဲ့အရာကို လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးက လပေိတျဆို့မှုကို လြော့ကသြှားစပေါတယျ။ ဒီလိုလုပျပွီးနောကျ လကွေောငျးပှငျ့တဲ့အထိ ခေါငျးကို စောငျးထားပေးပါ။
ဒဏျရာရတဲ့အခါ အနာသကျသာစဖေို့ အနာကပျပလာစတာကပျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပလာစတာကိုခှာတဲ့အခါ နညျးမသိရငျ ပွတျရှဒဏျရာတှဆေိုရငျ ပိုပွီးသှေးထှကျစသေလို တျောတျောနဲ့ မပြောကျတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ပလာစတာခှာတဲ့အခါ အရကျပွနျ (သို့) ရနှေေးနှေး(သို့)baby oilကို ဒဏျရာဧရိယာပျေါဖုံးအုပျပွီး ကျောပြျောသှားအောငျ ကွိုးစားပါ။ ရခေဲတုံးနှငျ့လညျး အေးခဲနိုငျပါတယျ။ ပွီးမှ ပလာစတာကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးခှာပါ။ ဒီနညျးလမျးက အနာသကျသာစသေလို ဒဏျရာကိုထပျပွီးမထိခိုကျစပေါဘူး။
သင်သိထားသင့်တဲ့ ရှေးဦးသူနာပြု အမြန်နည်းလမ်းလေးတွေ
ရှေးဦးသူနာပြုအခြေခံအချက်တွေကို သိထားခြင်းက အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုမှာ သင့်ကိုယ်သင်အပါအဝင် တခြားသူတွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုကြုံလာရင် အခြေအနေတစ်ခုကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ? သင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ?အကူအညီလိုတဲ့အရာလား? မလိုတဲ့အရာလား?ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိလာစေပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးဆီ မရောက်မီ လူနာအားအခိုက်အတန့် သက်သာစေဖို့ ပြုစုပေးရန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြဲတမ်း ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာ up-to-date ဖြစ်ချင်ကြတာကြောင့် လူတိုင်းသိထားသင့်သော ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း အမြန်နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
လက်မှာ ပြတ်ရှဒဏ်ရာသို့ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရလာတဲ့အခါ လက်အား သင့်နှလုံးlevelရဲ့ အထက်ကို မြှောက်ထားပေးပါ။ ဒါက ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေသလို အရည်ယိုစီးမှုမှလည်း ကူညီပေးပါတယ်။ သင့်ဒဏ်ရာက တင်ပါးပေါ်မှာဖြစ်လျှင် လဲလျောင်းနေပြီး ခေါင်းအုံးတွေနှင့်အတူ မြှင့်ထားပေးပါ။ ဒဏ်ရာကို မြှင့်ထားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် နှလုံး levelမှာ သို့မဟုတ် နီးနိုင်သမျှ နီးအောင် ထားဖို့ ကြိုးစားပါ။
၂။ အရေပြားအပေါ်ယံအလွှာ အပူလောင်တာ
အရေပြားအပေါ်ယံအလွှာ အပူလောင်တဲ့အခါ အနည်းငယ်နာကျင်ပြီး နီမြန်းရောင်ရမ်းတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ အပူလောင်တာကို ကုသဖို့ ဒဏ်ရာကို ရေနွေးနွေးဖြင့်ဆေးပါ။ ရေခဲရေက ပိုပြီးသက်သာတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ ရေခဲရေနှင့် ချက်ချင်းဆေးတာက တစ်ရှူးပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အပူလောင်တာကို ရေနွေးနွေးဖြင့် သန့်ရှင်းပြီးနောက်မှာ ရေခဲဝတ်တစ်ခုနှင့် ကပ်ထားပေးပါ။ ထောပတ်ကို တချို့က ရိုးရာဆေးတစ်လက်အဖြစ် သုံးကြပေမယ့် အပူရဲ့လွှတ်ထုတ်မှုကို နှေးကွးစေတာကြောင့် ဒဏ်ရာကို ပိုပြီးတော့တောင် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေနှင့် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ပြီး အပူလောင်တဲ့ နေရာကိုလိမ်းထားပေးပါ။
Heart attacksနှင့် ကြုံရတဲ့အခါ ရှေးဦးသူနာပြုစောစောရရှိခြင်းက ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို အကန့်အသက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အက်စပရင်ဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တာ၊ ဆရာဝန်က မသောက်ဖို့ ညွန်ကြားထားတာမရှိလျှင် အက်စပရင်ဆေး တစ်ပြားကို ဝါးစားခြင်းက သွေးလွှတ်ကြောများကို ပိတ်စေပြီး သွေးခဲမှုကို ဖြစ်စေသော သွေး platelets တွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။ အက်စပရင်ဆေးသောက်တဲ့အခါ ဆေးပမာဏနည်းနည်းလေးသာ သောက်ဖို့နှင့် ရေနှင့်သောက်တာ သို့ ဒီအတိုင်းမျိုချတာထက် ဆေးပြားကို ဝါးစားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ဒါက မြန်မြန်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးအရေးပေါ် ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ပျားတုပ်ခံရလျှင် အဆိပ်ဆူးကိုဖယ်ဖို့လိုပါတယ်၊ အရေပြားထဲက အဆိပ်ဆူးကိုဆွဲထုတ်တာက အဆိပ်ကိုလျော့နည်းသွားစေပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ အချိန်ကိုက်ဖြစ်ဖို့ပါပဲ။ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး အဆူးကို ဇာကနာဖြင့် ဆွဲထုတ်၊ ဖယ်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆူးထွက်သွားတာနဲ့ ဒဏ်ရာကို ဆေးကြောပြီး ရေခဲဖတ်အုပ်ထားပါ။ အလာ့ဂျစ်ဖြစ်လာရင် တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
အရိုးကျိုးတာနှင့် ကြုံလာတဲ့အခါ ဒဏ်ရာကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားဖို့(ဥပမာ-ခြေထောက်/လက်မှာအရိုးကျိုးတဲ့အခါ သွားဆွဲဆန့်ဖို့) မကြိုးစားပါနဲ့။ အရိုးကို ထပ်မံထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင် မလိုအပ်ဘဲ မလှုပ်ရှားပါနဲ့။ ကျိုးတဲ့အရိုးကို နေရာမရွေ့အောင် အဝတ်ခေါက်ထူထူတစ်ခုကို သုံးပြီး ငြိမ်အောင် စည်းထားပေးပါ။ ရောင်ရမ်းတာ သက်သာစေဖို့ ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးပါ။ ရေခဲဝတ်ကို အရေပြားပေါ်တိုက်ရိုက်မကပ်ဘဲ အဝတ်တစ်ခုခုပတ်ပြီးမှ ကပ်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
တခါတလေမှာ အသားထဲကို သစ်သားစတွေ၊ စူးတွေ ဝင်နေတာကြုံဖူးမှာပါ။ ဒီလိုဆူးစူးတာ၊ သစ်သားစတွေ ဝင်တာက အရေပြားကို ရောင်ရမ်းစေပြီး အလွယ်တကူ ပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကြုံရတဲ့အခါ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် အရင်ဆုံး ပိုးသန့်စင်ပေးပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေထဲမှာ ပိုးသတ်ထားတဲ့ အပ်နှင့် ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ်။ အစထွက်လာပြီဆိုရင် ဇာကနာဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက် အဲ့ဒီနေရာကို ဆပ်ပြာ၊ ရေနှင့် ဆေးကြောပေးပါ။
၆။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်တဲ့အခါ
တစ်ယောက်ယောက် အသက်ရှုတာ ရပ်တန့်ပြီဆိုရင် အများအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ လေကြောင်းကို တစ်ခုခုပိတ်ဆို့နေတာ ကြောင့်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ တစ်ခုခုဆို့နေတာ ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အရည်(သို့)အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကို ဖယ်ရှားပါ။ လေကြောင်းပွင့်ဖို့ နဖူး သို့ ခေါင်းရဲ့ထိပ်နားမှာ သင့်လက်ကိုထားပြီး လူနာရဲ့ ခေါင်းကိုစောင်းပြီး မေးစေ့ကို ပင့်ထားပေးပါ။ တနည်းအားဖြင့် သင့်လက်တွေကို မေးရိုးအောက်မှာထားပြီး အောက်မေးရိုးကို အပေါ်ကိုတွန်းခြင်းဖြင့် “jaw thrust”လို့ခေါ်တဲ့အရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းက လေပိတ်ဆို့မှုကို လျော့ကျသွားစေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပြီးနောက် လေကြောင်းပွင့်တဲ့အထိ ခေါင်းကို စောင်းထားပေးပါ။
ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ အနာသက်သာစေဖို့ အနာကပ်ပလာစတာကပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပလာစတာကိုခွာတဲ့အခါ နည်းမသိရင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာတွေဆိုရင် ပိုပြီးသွေးထွက်စေသလို တော်တော်နဲ့ မပျောက်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပလာစတာခွာတဲ့အခါ အရက်ပြန် (သို့) ရေနွေးနွေး(သို့)baby oilကို ဒဏ်ရာဧရိယာပေါ်ဖုံးအုပ်ပြီး ကော်ပျော်သွားအောင် ကြိုးစားပါ။ ရေခဲတုံးနှင့်လည်း အေးခဲနိုင်ပါတယ်။ ပြီးမှ ပလာစတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်းခွာပါ။ ဒီနည်းလမ်းက အနာသက်သာစေသလို ဒဏ်ရာကိုထပ်ပြီးမထိခိုက်စေပါဘူး။